ရေးထုံးနည်းနာအဖြာဖြာ (၁) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on December 13, 2013 at 11:40 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အငြင်းဝါကျတွင် negative နှစ်ခါထပ်သုံးခြင်းကိုရှောင်ပါ။ Double Negatives to Avoid
ပြင်သစ်လူမျိုးတစ်ယောက် “Je ne sais rien” ဟုပြောသံကြားလျှင် မည်သည့်ပညာတတ်ပြင်သစ်လူမျိုးမှ မျက်ခုံးပင့်ကြမည်မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် “I don’t know nothing” ဟုပြောသည့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားပြောသူတစ်ယောက်ကိုမူ ပညာသိပ်မတတ်သူဟု ချက်ချင်းအသတ်မှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
(ပြင်သစ်ဘာသာတွင် ne သည် no ဖြစ်ပြီး rien သည် nothing ဖြစ်သည်။)
တစ်ချို့သောဘာသာစကားများ (စပိန်၊ ပြင်သစ်) တွင် negative concord ဟုခေါ်သော အငြင်းစကားနှစ်ခုထည့်ပြောခြင်းကို သဒ္ဒါအမှားဟုမယူဆကြပါ။ သို့ရာတွင် အင်္ဂလိပ်စကားတွင်တော့ double negative သည် အလယ်ခေတ်လောက်ကစပြီး သဒ္ဒါမကျဟု မြင်လာကြသည်။
double negative ကိုဘာကြောင့် စံမမီသည့်အဆင့်အတန်းထည့်သနည်းဟုတစ်စုံတစ်ယောက်က စောကြောကောင်းစောကြောပါလိမ်မည်။
၁၇၆၂ ခုနှစ်တွင်စာပေက၀ိဘုန်းတော်ကြီး Bishop Robert Lowth (1710-1787) က A Short Introduction to English Grammar ဆိုသည်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုဘုန်းတော်ကြီးက အောက်ပါဥပဒေသကို ပြဌာန်းခဲ့ သည်။
Lowth သည် လက်တင်နှင့်ဟီးဘရူးပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါရှေးကျသည့်ဘာသာစကား နှစ်မျိုးစလုံးတွင် negative concord မရှိကြပေ။ Lowth ၏အဆိုပါစည်းကမ်းသည်နှောင်းလူတို့လိုက်နာရသည့် ဥပဒေသဖြစ်လာခဲ့သည်။ အောက်ပါစကားလုံးများနှင့်တွဲကာ not ကိုမည်သည့်အခါမျှမသုံးရပေ။
◊ hardly ◊ scarcely ◊ only ◊ neither ◊ never ◊ no one ◊ nobody ◊ nothing ◊ no ◊ none
အောက်ပါခရေပွင့်ပြ၀ါကျတို့မှာ အချင်းချင်းနားလည်သော်လည်း စံမမီသည့်အင်္ဂလိပ်ဝါကျများဖြစ်ကြသည်။
*We don’t need no education.
*I don’t want none of those mushrooms.
၄င်းတို့အစား standard English ဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းပြောနိုင်သည်။
We don’t need an education.
I don’t want any of those mushrooms.
မှတ်ချက်။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ double negative တွေကိုလှိုင်လှိုင်သုံးကြတာတွေ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။ လူမည်းတွေ၊ ကောင်းဘွိုင်နဲ့ ပညာမတတ်သူတွေနေရာမှာ dramatic effect ရစေဖို့သုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သဒ္ဒါပညာရှင်များရဲ့ ရှုံ့ချမှုကို double negative တိုင်းတော့ခံရသည်မဟုတ်ပါ။ ၁၇ ရာစုကတည်းက
ခေတ်စားခဲ့သည့် not un- ပုံစံသည်ယနေ့ထိတိုင်စံမီအင်္ဂလိပ်စကားအဖြစ် လက်ခံထားကြပါသေးသည်။ ဥပမာ ခရီးသွားဆောင်းပါးတစ်ခုတွင် “the flavor was unusual, but not unappealing.” ဟုရေးထားသည်ကို တွေ့ရမည်။ not, နှင့် unappealing နှစ်ခုစလုံးသည် negatives များဖြစ်ကသော်လည်း “အရသာသည် ထူးဆန်းလှသော်လည်း စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ not unappealing သည် appealing ပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့အသုံးများသည့် double negetives များမှာ not uncommon, not unusual တို့ဖြစ်သည်။
Does an undergraduate apply foragraduate program or to it?
Doesajob applicant apply toacompany or with it?
အောက်ပါဥပမာများက “apply for” and “apply with” တို့ကို “apply to” သုံးရမည့်နေရာတွင်မှားယွင်းသုံးစွဲထားသည်ကိုပြနေသည်။
* Winston is applying for the teaching program at Harvard.
* Interested in applying with the world’s largest retailer?
* Customer Service Careers | Apply with DISH
apply to ထံသို့လျှောက်ထားသည်
၄င်းသည် မိမိအား သင်တန်း၊ အလုပ်တစ်ခုတွင် သင့်တော်သူအဖြစ် လျှောက်ထားခြင်းအဓိပ္ပါယ်ရသည့် အီဒီယံဖြစ်သည်။
apply toacompany for employment.
apply toabank’s loan department foraloan.
apply for အတွက်လျှောက်ထားသည်။ တောင်းခံသည်။
apply for scholarship money.
apply for admission. You apply forajob.
apply with ဖြင့်လျှောက်သည်
ဤနေရာတွင် with ဆိုသည့်စကားသည် “ဖြင့်” အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သည်။ “နည်းလမ်း၊ အားဖြင့်၊ မှတစ်ဆင့်”လျှောက်ထားသည် ဟုအဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သည်။
You can apply with the click ofamouse.
You can apply withaprinted application.
You can apply withaprogram like Compass, oraservice like Monster.
Winston is applying for the teaching program at Harvard.
Interested in applying with the world’s largest retailer?
Customer Service Careers | Apply with DISH ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အခွင့်အလမ်း။ DISH နှင့်လျှောက်ပါ။
အောက်ပါတို့မှာ apply အား preposition နှင့်တွဲသုံးလျက်ဖြစ်စေ၊ မတွဲလျက်ဖြစ်စေသုံးတတ်သည့် အသုံးတို့ဖြစ်သည်။
apply paint toasurface မျက်နှာပြင်တွင်ဆေးသုတ်သည်။
apply ointment toawound ဒဏ်ရာကိုလိမ်းဆေးလိမ်းသည်။
apply oneself to one’s studies မိမိလေ့လာမှုကိုဝါယမစိုက်ထုတ်သည်။
applyaremedy toaproblem ပြဿနာတစ်ခုအားယာယီဖြေရှင်းသည်။
applyarule toasituation ဥပဒေသတစ်ခုအား အခြေအနေတစ်ရပ်တွင်အသုံးချသည်။
apply pressure toawound ဒဏ်ရာတစ်ခုအား ဖိထားသည်။ (ကျပ်စည်းသည်)
apply pressure toaperson လူတစ်ယောက်အားဖိအားပေးသည်။
apply one’s talents တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ပါရမီကိုအသုံးချသည်။
applyapatch toagarment အ၀တ်စတစ်ခုကို ဖာသည်။
မူရင်း။ Maeve Maddox ၏ Double Negatives to Avoid နှင့် Apply to, Apply for, and Apply with
Permalink Reply by Thike Htun on December 13, 2013 at 12:33
သင်ယူလေ့လာခွင့်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ
Permalink Reply by Sai Tun Nyo on December 13, 2013 at 13:07
Permalink Reply by kyawkhine on December 13, 2013 at 15:40
I'll enjoy with your new lessons.
Permalink Reply by Phone Myint on December 13, 2013 at 19:10
သင်ယူခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ အသင်းကြီး အောင်မြင်တိုးတက်ပါစေ။ အသံဖိုင်တွေလည်း များများ တင်နိုင်ပါစေ ခင်ဗျာ။
Permalink Reply by sycorax on December 14, 2013 at 0:42
Permalink Reply by Corazon on December 16, 2013 at 16:08
ငယ်ငယ်တုန်းက "We don't need no education" ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ကြားတုန်းက တော်တော်မျက်စိလည်တာ။ education ကိုလိုချင်တယ်လို့ပဲ ဆိုလိုတာလားပေါ့။ mv မှာပြနေတော့လည်း ဆရာတွေဆိုးတဲ့အကြောင်း ပြနေတယ်ပေါ့။ နောက်မှ သူတို့တွေလည်း တခါတရံ အဲ့လို grammar မကျတာတွေလည်း ပြောတတ်ပါလားဆိုတာ သိလာရတယ်။
Permalink Reply by myo min on August 21, 2014 at 21:47
Permalink Reply by Kundala on October 9, 2015 at 19:46
Permalink Reply by Ashin Khema Nanda on October 11, 2015 at 20:17